Golaha Guud - Wadashaqaynta Tucson Pima si loo Joojiyo Hoy La'aanta
Golaha Guud ee TPCH waa guddiga iskaashiga xubnaheena, oo kulma saddex-biloodle Khamiista labaad ee Febraayo, May (Kulankeena Sannadlaha ah), Ogast, iyo November. Waxay ka kooban tahay laba nooc oo xubno ah:
Xubnaha guud, qof kasta oo daneynaya soo afjarida hoy la'aanta iyo arrimaha la xiriira guri la'aanta, wuxuu xaadiraa kulamada, wadahadalna wuu la sameeyaa.
Xubnaha Codbixinta, xubnahan si joogto ah ugaqayb galaya Golaha Guud iyo kulamada guddiga oo buuxiya soona gudbiya foomka xubinnimada. Xubnaha codeyntu waxay sameyaan iyo qorshe labaad, u codeeyaan mowduucyada waxayna doortaan xubnaha Golaha Agaasimayaasha TPCH si ay kuraas uga furaan Shirka Sannadlaha ah.
Si loo noqdo xubin cod bixin, waa in wakaalad ama shaqsiba la doortaa.
Dhameystira oo u gudbi foomka xubinnimada Xoghayaha Xog-hayaha Guud; iyo
Ka qaybgal saddex kulan (3) kulan kasta oo iskudhafan waxyaabaha soo socda: Kulamada Golaha guud, shirarka Guddiga Joogtada ah ama shirarka guddi hoosaadka muddo saddex bilood gudahood ah.
Jooji mudnaanshaha codbixinta adiga oo sii wata ka-qaybgalka ugu yaraan hal kulan guddi rubuc kasta oo ka qaybgal ugu yaraan kulan kale oo Golaha Guud ah (taasi waa, ma seegin laba kulan oo Golaha Guud oo isku xiga).
Waxaan kugu casumaynaa inaad nagu soo biirto mid guud ama mid codbixin ah. Si aad u noqoto Xubin Codaynta TPCH, biloow ka qaybgalka shirarka oo ku buuxi foomka xubinimada www.tpch.net/so biir.
Shirka Golaha Guud ee TPCH